China Potassium Persulphate Manufacture and Factory | FIZA
Anaran'ny vokatra: Persulphate potasioma
Bika Aman 'endrika: vovoka kristaly
Tsia EINECS: 231-781-8
Drafitra molekular: K2S2O8
Kaody HS: 28334000
Ny potassium persulphate dia kristaly fotsy, vovoka tsy misy fofona, ny haavon'ny 2,477. Azo foanana 100 ° C eo ho eo izy io ary levona ao anaty rano tsy etanol, ary misy oksidasiôna matanjaka. Izy io dia ampiasaina hamokarana detonator, bleacher, oxidant ary initiator ho an'ny Polymerization. Manana tombony manokana ny hoe saika tsy hygroscopic manana fitoniana fitehirizana tsara amin'ny maripana ara-dalàna ary mora sy azo antoka ny fikirakirana azy.
Chloride sy Chlorate (as Cl)
Metaly mavesatra (toy ny Pb)
1. Polymerization: Initiator ho an'ny emulsion na vahaolana Polymerization ny acrylic monomers, vinyl acetate, vinyl chloride sns ary ho an'ny emulsion co-polymerization ny styrene, acrylonitrile, butadiene sns.
2. Fitsaboana vy: Fitsaboana ny metaly (egin ny fanamboarana semiconductors; fanadiovana sy fametahana tariby vita pirinty), fampiatoana ny varahina sy ny alimina.
3. Kosmetika: singa tena ilaina amin'ny famolavolana bleaching.
4. Taratasy: fanovana ny starch, fametahana lena - taratasy tanjaka.
5. Textile: mpandraharaha mpanamory sy mpanamontsina bleach - indrindra ho an'ny fanosotra mangatsiaka.
Kitapo tenona plastika ①25Kg
Kitapo PE 25Kg
Manaraka: Fire Assay Crucible